Izincwadi Eziphezulu Zamahhala, Ukuhlanganiswa Kwemisebenzi Ehle Kakhulu Yokufundwa Nokubaluleka | Izincwadi Zamanje
Izincwadi eziphezulu zamahhala
Noma kunzima ukukholelwa, namuhla kungenzeka ukuthi kutholakale izincwadi eziningi zamahhala kuwebhu, zombili ngababhali abadumile, kanye nalabo abasanda kuqala ezincwadini. Impela, izihloko zakamuva zombhali wethu omthandayo ngeke zitholakale mahhala, kepha kunezinye izindlela eziningi ezithokozisayo.
Kunamapulatifomu ahlukahlukene edijithali - njenge Amazon- ukuthi balazisa iqoqo elihle kakhulu lemisebenzi ngaphandle kwezindleko, ehlanganisa izinhlobo ezahlukene zemibhalo. Kumele kuqashelwe ukuthi izincwadi zamahhala ziyatholakala nge- eBook, nokuthi ezimweni eziningi kwanele ukubhalisa ukuthola lezi zinguqulo. Nazi ezinye izinketho kule ndawo.
1 Inkungu neNkosi yamaKristalu aphukile (2015)
2 Ukubuya Kwempisi (2014)
3 Ukwazi u-Alex noBea: Umculo wami nguwe (2020)
4 Ngivuse lapho september kuphela (2019)
5 I-Blue Moon (2010)
6 I-Apple Pie kaNathalie (2020)
Inkungu neNkosi Yamakristalu Aphukile (2015)
Kungumsebenzi wamaphupho ogcwele ukungabaza, owenziwe ngumbhali waseMadrid uCésar García Muñoz. Uhlelo lwayo lokuqala lwanyatheliswa ngo-2015 futhi luhambisana nezinye izincwadi ezimbililapho ukuqhubekela phambili kwenkungu kuqhubeka khona ngombuso wamakristalu aphukile. Ngaphandle kokungabaza, iyinoveli ethokozisayo, ebhekiswe kubafundi abasebancane, kepha engabamba abalandeli abaningi be-thriller.
Isakhiwo siqala lapho umuntu ongaziwa enikeza izintokazi ezimbili incwadi yasendulo, equkethe indaba yezwe lamaphupho.. Baqala ukufunda, lapho kwethulwa khona uHans, ongumlingiswa ophethe ukutshela wonke umlando. Ngokulandelayo, uHans uchaza uNiebla, umfana ongumGypsy ovela ezweni lomlingo elibizwa ngokuthi: The Kingdom of Broken Crystals.
UNiebla unomsebenzi oyimfihlo futhi ngalokhu kufanele aye emhlabeni wangempela. Lapho esekhona, wenza abangane ababili abahle - omunye wabo uHans - okumele abuyele naye ezweni labo ukuze aphephe. Kepha kukhona okungahambi kahle lapho kusendaweni yamakristalu aphukile futhi kumele bafune ukuphuma lapho, njengoba zilandelwa izitha ezahlukahlukene. Ukufihla kuzobaluleka ukuze usinde kulolo hambo.
Inkungu nenkosi ye ...
Ukubuya kweThe Wolf (2014)
ISpanish uFernando Rueda ungumbhali wale noveli eyimfihlakalo nobunhloli, izihloko lapho umlobi engungoti khona. Kuyena Iqukethe uMikel Lejarza, ongaziwa ngokuthi "El Lobo," njengomlingiswa ophambili, owayeyinhloli yaseSpain. Ngawo-70s, uLejarza wakwazi ukungena futhi ahlasele kakhulu iqembu lamaphekula i-ETA, ebopha amalungu angaphezu kwama-300 futhi wephula isakhiwo senhlangano eSpain.
Kuyindaba "eqanjiwe" ngoMikel "El Lobo" Lejarza, eminyakeni engama-30 ngemuva komsebenzi wakhe wobunhloli eSpain. UMikel ubelokhu ecashile sonke lesi sikhathi, enza izinguquko ezehlukene zomzimba nezengqondo ezimthinta kakhulu nsuku zonke. Ukhungathekile ngakho-ke fihla, isimilo uya eDubai, lapho anquma khona ukuba yingxenye yeseli le-Al Qaeda.
ULejarza ungumngani kaKarim Tamuz, ongumSulumane omethula enhlanganweni yamaphekula. Ngokufana, Ummeli Wemisebenzi ye-CIA uSamantha Lambert Wokuqeda i-Al Qaeda. Ella, ngemuva kokungena, Usondela ku-El Lobo ukuze amsekele. Ngokuyinhloko, uyenqaba ukumsiza, yize konke kuzoshintsha ngemuva kokuthi bobabili befunde ngokuhlaselwa kwamaphekula okusha ngesihluku kakhulu kunalokho kwango-11/XNUMX.
Ukubuya Kwempisi kusuka ...
Ukuhlangana u -lex noBea: Umculo wami nguwe (2020)
Le noveli yindaba yothando futhi yincwadi yokuqala ebhalwe ngu-Eva M. Saladrigas, ongowokuzalwa eTarragona, ongungoti kulolu hlobo lwezincwadi. Umculo wami nguwe yindaba emfushane esekwe kubalingiswa bayo abakhulu ababili: uBea no-Álex.
UBea no-Alex baba abangane ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi. Bobabili banezimpilo ezingafani, kodwa ezihambisana nobuciko. UBea ungumdansi we-ballet futhi u-Álex ungumculi ofuna ukuphumelela. Ngemuva kwesikhashana, bayakwazi ukuqondana futhi babonane mathupha, ngithola ukuthi kuzamazame futhi kwavusa imizwa eminingi kubo bobabili.
Njengoba umsebenzi ka-Álex ukhula, uBea ukhungathekile yizwi abakhuluma ngalo ebudlelwaneni bakhe futhi bagcina sebeziqhelelanisa naye. Eminyakeni edlule, uBea uthintwa ngu-Álex, osengusaziwayo manje; yena, kunalokho, ngemuva kwesahlukaniso nendodakazi, uhlala emile eqinisweni lakhe. Izinguquko eziningi ziza ezimpilweni zabo bobabili, kanti ngenkathi ukuhlangana kwenzeka, uthando, umona, izinjabulo nomculo benza into yabo.
Ukuhlangana u -lex noBea: ...
Ngivuse lapho septemba iphela (2019)
Kuyinto a inoveli emnyama ebhalwe nguMonica Rouanet. Ngivuse lapho septemba iphela Ihlelwe phakathi kweNgilandi neValencian Albufera. Indaba ilandiswa ngumlingiswa wayo oyinhloko: u-Amparo. Ngenkathi ebhekene nokulahlekelwa ngumyeni wakhe, indodana yakhe uToñete yamthinta.
U-Amparo uhlala edolobheni elincane e-Albufera de Valencia, lapho abelokhu edlula emhlabeni ngokushona komyeni wakhe u-Antonio isikhathi esingaphezu konyaka.. Ukunyamalala kwakhe ngokomzimba kwakuhlala kuyindida, njengoba kwakutholakala umkhumbi wempahla yakhe kuphela oneminonjana yegazi, kodwa hhayi umzimba wakhe. Idolobha likhuluma kakhulu ngaleli cala eliyindida futhi banemibono ehlukahlukene ngokufa kuka-Antonio.
Ngosuku olujwayelekile njenganoma yiluphi olunye, u-Amparo uthola umyalezo ophuthumayo ovela endodaneni yakhe uToñete, ohlala eNgilandi. Ngokushesha, njenganoma imuphi umama, uya ukusiza indodana yakhe. Ngenkathi esezweni lamaNgisi, u-Amparo akakwazi ukumthola: umfana unyamalele. Owesifazane, ngaphandle kokuba ngumphenyi, kuzofanele abophe imichilo evulekile ukuyithola… ngokwenzeka kwakho uzothola kanzima izimfihlo, abanye babo baze bazihlanganisa nomyeni wakhe u-Antonio.
Ngivuse lapho sengiqedile ...
Inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka (2010)
I-Spanish Francine Zapater, ongowokuzalwa e-Barcelona, ​​wethule ngo-2010 i Inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka, indaba yothando enamaphupho athile. Umdlalo unabalingiswa ababili abakhulu: u-Estela Preston no-Erik Wallace. Kuthando lwentsha olujwayelekile, kepha ngemininingwane eyenza ukuthi ihluke kakhulu. Impumelelo yakhe ibimangalisa, uzuze indawo yokuqala ku- I-Amazon Kindle Youth ngokubukwa okungaphezulu kwama-40.000.
U-Estela yintokazi ezolile futhi ekhathalela izifundo zayo kuphela, isimo esishintsha ngokufika kuka-Erick, umfundi omusha omuhle wokushintshanisa, okwazi ukumthwebula. Njengoba indaba yabo yothando iqhubeka, ezinye izimo ezinzima ziqala ukuvela ku-Estela, njengoba u-Erick egcina imfihlo enkulu ezokwenza impilo yakhe ibe nzima.
Uphayi we-apula likaNathalie (2020)
Yindaba emfushane yombhali waseSpain uCarla Montero. Lesi sakhiwo sibekwe edolobheni elincane elibizwa ngokuthi iSaint Martin sur Meu, eminyakeni eyalandela iMpi Yezwe II. Indaba iphefumulelwe okwenzeka kulokho okubizwa ngokuthi "ama-bâtards ama-Boches”, Izingane ezizalwe ngenxa yokuhlangana kwamantombazane aseFrance namasosha aseJalimane.
UNathalie ungumnikazi osemncane wendawo yokudlela yasePatisserie Maison edolobheni elincane laseSaint Martin sur Meu. Elandela isiko lomndeni, wazinikela ekhekheni. Abantu bendawo bajwayele ukwenza imikhuba, kanti uphaya we-apula olungiswa ngumlingiswa ophambili ungomunye wamasiko ayizintandokazi endaweni.
Ngakolunye uhlangothi ngu Paul, insizwa eyazalwa ngothando oluyimfihlo phakathi kukaluteni waseJalimane nentokazi yaseFrance. Ngenxa yesisindo senhlalo yokuba yindodana eyisinengiso yesikhulu samaNazi -un i-bâtard de Boches-, umfana anqume ukubaleka. Kodwa-ke, phakathi nohambo lwabo, el ngokubabazekayo Iphunga likaphayi we-apula limholela ekhefi likaNathalie.
Lapho, bobabili bahlangana ngamehlo abo okokuqala futhi bathathekile. Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke, kuqala indaba yothando enamandla enikeza uPaul intando yokuphila futhi ishintshe ngokuphelele impilo yompheki osemncane khekhe.
Uphaya we-apula we ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi eziphezulu zamahhala
Incwadi enhle kunazo zonke emhlabeni
ULeon Felipe. Ukukhethwa kwezinkondlo ngosuku lwakhe lokuzalwa